OpenProject: Ntughari ohuru nke 11.3.1 nke Software Management Software | Site na Linux
OpenProject: Ntughari ohuru nke 11.3.1 nke Software Management Software
Linux Post Wụnye | 10/06/2021 06:00 | Aplicaciones, Noticias
Ebe ọ bụ, nanị ụbọchị ole na ole gara aga ụdị ọhụrụ nke ama ama Nchịkwa oru ngo (SGP) de Meghee Isi mmalite akpọ "OpenProject"Taa, anyị ga-arara ọkwa a maka ịmara ihe kacha mkpa gbasara ya.
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na SGP n'oge, ha dị ngwaọrụ dijitalụ akụkụ dị oke mkpa na nke akụkụ nke ndụ kwa ụbọchị nke ọtụtụ dịgasị iche iche ụlọ ọrụ na òtù dị iche iche, dị ka ndị ọkachamara si n'ọhịa dị iche iche. Ya mere, na SGP na-atụle ọtụtụ ugboro, a atụmatụ uru maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị otú ahụ na-agbanwe agbanwe.
Ọ bụghị oge mbụ anyị kwuru banyere a SGP na Blog, ma ọ bụrụ na oge mbụ banyere "OpenProject". Ọzọ SGP anyị kwurula banyere ya ka akpọrọ "ProjectLibre". Nke anyị kọwara na ohere gara aga dị ka ndị a:
"Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ahụ kwesịrị ijikwa ọrụ ha, ma ị bụ injinia ma ọ bụ onye ọrụ nkịtị, ma ị jiri Microsoft Project maka nke a, ana m enye gị ozi ọma: Anyị nwere ụzọ ọzọ akpọrọ n'efu Nkọwapụta ọ bụghị naanị n'efu. Dị ka ndị okike ya si kwuo, echiche mbụ bụ ịmalite ọzọ na Microsoft Project Server a na-akpọ ProjectLibre Project Server, mana ha ghọtara na ha ga-ebu ụzọ nye ngwá ọrụ maka desktọọpụ na nsụgharị maka sava." ProjectLibre: Nhọrọ nke Microsoft Project
ProjectLibre: Nhọrọ nke Microsoft Project
ndị ọzọ SGP ma ọ bụ yiri (ọzọ) dị Meghee Isi mmalitenke n'efu ma ọ bụ "freemium" Ha bụ: Asana, ClickUp, Kanboard, Basecamp, Notion, Quire, Redmine, Taiga, Trello na Wrike, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ.
1 OpenProject: Ngwanrọ Open Management Software
1.1 Gịnị bụ OpenProject?
1.3 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na mbipute 11.3.1
1.4 Nbudata, nwụnye, jiri
OpenProject: Ngwanrọ Open Management Software
Gịnị bụ OpenProject?
Dị ka gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, "OpenProject" A kọwara ya dị ka ndị a:
"Ọ bụ ihe na-emepe emepe Project Management Software, nke enyere iji nye njikwa oru oma nke kpochapụwo, agile ma ọ bụ ngwakọ ngwakọ na gburugburu echedoro."
Mgbe, na ya gọọmentị webụsaịtị na GitHub, a kọwara nke ọma dị ka ndị a:
"Nchịkọta Projectlọ Ọrụ Gọọmentị na-achịkwa Weebụ."
"OpenProject" Ọ na-enye ọtụtụ ọrụ nke ọrụ, dị ka: Ọtụtụ njikwa oru ngo, imekọ ihe ọnụ (mmekorita), na nkwukọrịta nke ọma na usoro ndụ niile nke ọrụ jikwaa.
Na mgbakwunye, ọ na-enye nkwado maka njikwa ọrụ, nsuso nsị, njikwa chọrọ, atụmatụ ngwaahịa, njikwa nzukọ, nyocha oge yana ịkọ akụkọ ọnụ, njikwa mmefu ego, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ na-abịa n'ọtụtụ ụdị, mbipụta obodo n'efu, mbipụta igwe ojii, na mbipụta ụlọ ọrụ. Nke a na-enye ya ohere itinye ya na akụrụngwa ya, iji nwee njikwa na njikwa nke 100% nke data ahụ.
"OpenProject bụ ụzọ kachasị mfe maka ndị otu iji debe ọrụ ha, wee nweta nsonaazụ. Onye ọ bụla maara ihe mgbaru ọsọ ma soro ndị otu na-arụ ọrụ iji mezuo ha. Hazi ọrụ nke anyị na ikenye ndị ọzọ otu ọrụ ọrụ dị mfe. Na OpenProject ị nwere ọrụ gị niile na nkwukọrịta n'otu ebe."
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na mbipute 11.3.1
Versiondị ọhụrụ dị n'okpuru nọmba 11.3.1 nwere ụbọchị ntọhapụ nke 08/06/2021. Ma ọ nwere ọtụtụ ndozi ahụhụ nke enwere ike nyochaa na ihe ndị a njikọ. Ọ bụ ezie na, maka nkọwa zuru ezu banyere akụkọ banyere nke ọ bụla dị ugbu a na nke gara aga, enwere ike ịchọpụta ihe ndị a njikọ.
Nbudata, nwụnye, jiri
Maka ntinye ya, enwere ike itinye ya ozugbo n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile - GNU / Linux Distros, site na Njikwa ngwugwu nwa afọ site na ọnụ (njikwa). Na maka nbudata na nwụnye nke ụdị ọhụụ nke Mbipụta Obodo i nwere ike na-agba ọsọ na-esonụ usoro gọọmentị kọwara na ndị a njikọ. Emechaa, mechaa mezuo ya "OpenProject" Site na Nchọgharị weebụ ọkacha mmasị.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ngwa ahụ na iji ya, ị nwere ike inyocha ya ngalaba ederede site na mbido na-esote njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere mmata Nchịkwa oru ngo (SGP) de Meghee Isi mmalite akpọ «OpenProject» na nsụgharị ọhụrụ ya "11.3.1" na nso nso a weputara; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » OpenProject: Ntughari ohuru nke 11.3.1 nke Software Management Software
Mozilla, Google, Apple na Microsoft jikọtara ọnụ iji dozie mgbakwunye
Bitcoin edebeworị iwu na El Salvador wee bụrụ mba izizi kwadoro ya dị ka ọmịiko iwu